Dheemanka 'Champagne' ee dahabka sida dahabka, hilqadaha dusha sare, jijimmada, qoorta
Dheemanka 'Champagne diamond' waa mid ka mid ah dheemanta loo isticmaalo dahabka, Waxaa had iyo jeer loo dhejiyaa sidii giraan, hilqado dalool leh, jijimo, silsilad ama silsilad. Dheemanka loo yaqaan 'Champagne dheeman' waxaa badanaa la dul saaraa dahabka jiiska ah sida guntinta kaqeybgalka ama giraanta arooska sida loogutalagalay.
Dheemanka dheemanku waa nooc adag oo kaarboon element leh oo leh atomkiisa oo lagu habeeyay qaab qalooc ah oo loo yaqaan "diamond cubic". Heerkulka qolka iyo cadaadiska, nooc kale oo adag oo kaarboon oo loo yaqaan 'graphite' waa qaabka kimikalka xasilloon, laakiin dheemanku marna uma beddelayo. Dheemanku wuxuu leeyahay adkaanta ugu sareysa iyo dhaqdhaqaaqa kuleylka ee walxaha dabiiciga ah, guryaha loo adeegsado codsiyada waaweyn ee warshadaha sida goynta iyo qalabka wax lagu hagaajiyo. Iyaguna waa sababta ay unugyada unugyada dheemanku u soo saari karaan maadooyinka cadaadiska laga helay dhulka hoose.
Dheemanka dabiiciga ah badankood waxay leeyihiin da 'u dhaxaysa 1 bilyan ilaa 3.5 bilyan sano. Badankood waxaa lagu aasaasay qoto dheer inta udhaxeysa 150 iyo 250 kiiloomitir dhulka, inkasta oo qaar yar ay ka yimaadeen illaa 800 kiiloomitir. Cadaadis sarreeya iyo heerkulka, dareeraha kaarboon-ga leh ayaa kala diri kara macdanaha oo ku beddelay dheeman. Dhawaanahan, waxaa loo qaaday dusha sare qaraxyo foolxun waxaana lagu dhajiyay dhagxaan waaweyn oo loo yaqaan kimberlites iyo nalalka laambada.
Nitrogen-ka ayaa ah inta ugu badan ee wasakhda ugu badan laga helo dheemanta qaaliga ah waxayna mas'uul ka tahay midabka jaalaha iyo bunni ee dheemanta.
Dheemannada isku habboon
Dheeman dheellitirka ka sameysan waxaa laga soo kaban karaa kaarboon-saafi ah marka loo eego cadaadisyada sareeya iyo heerkulka ama ka yimaada gaaska hydrocarbon gaaska uumibixinta uumiga. Dheemanka dhagaxa lagu daydo ayaa sidoo kale laga samayn karaa ashyaa'da ay ka mid yihiin "zirconia cubic zirconia" iyo "silicon carbide". Dheemannada dabiiciga ah, isku-darka iyo dheelitiranka ayaa badanaa lagu kala saaraa iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka indhaha lagu cabbiro ama cabbiridda dhaqdhaqaaqa kuleylka.
Ku iibso dheemankeena dabiiciga ah dukaankeena
Waxaan ku samaynaa dahab qurxin ah oo leh dheemman sharooto leh sida giraan, hilqado labalaab ah, jijimo, silsilad, ama pendant. Dheemanka 'Champagne diamond' waxaa badanaa la dul saaraa dahabka jibbaarka ah sida giraan gelinta ama giraanta arooska